Sebenzisa ijelo lakho kunye neevidiyo usebenzisa ezona ndlela zilungileyo zeYouTube zokukhula okuphezulu ngaphandle kokuthenga iintengiso! Siqinisekisiwe nguGoogle kuKhululo lweSiteshi seYouTube kwaye sazi ukuba kuthatha ntoni ukwenza!
Siyayazi indlela yokwenza kwiYouTube!
Iingcali zethu eziQinisekisiweyo zeYouTube zenza i-YouTube ye-YouTube ukusukela ngo-2011. Siza kuvavanya ngokupheleleyo ijelo lakho kunye neevidiyo, kwaye ke sikunike imiyalelo ethile, eneenkcukacha kunye nokulandela imiyalelo ngokukhawuleza ukuyenza kunye nenqanaba eliphezulu kwiziphumo zokukhangela. Oku kukhokelela kutrafikhi evela kubabukeli ababaluleke kakhulu - eyona yona yeyona nto iphilayo.
Uvavanyo olunzulu lwevidiyo eshicilelweyo kwisitishi sakho seYouTube + uhlalutya abo ukhuphisana nabo + Isicwangciso samanyathelo ama-5 amanyathelo akho alandelayo.
Uvavanyo olupheleleyo lwevidiyo yakho yeYouTube, esivumela ukuba sikunike isihloko esinyusiweyo + Inkcazo + 5 Amagama aphambili / iiHashtag.
Vavanyo olupheleleyo lwe-SEO yeVidiyo
Isihloko esi-1 esiNikezelweyo
1 INkcazelo ephuculweyo inikezelwe
I-5 yamaGama aphakanyisiweyo / iiHashtag
Ingcali, ehlengahlengiswe ngokupheleleyo Isibhengezo seYouTube Channel kunye neeThumbnails zeVidiyo zeYouTube.
Umgangatho woyilo lobuchule
Isiko lokuThelekisa i-Brand yakho
Uyilo olomeleleyo kunye nokuzibandakanya
Ubungakanani obufanelekileyo kunye noMgangatho weYouTube
Iphucula i-Click-Thru-Rate (CTR) yakho yokuCofa
Ixesha lokuhambisa: Iintsuku ezingama-1 ukuya kwengama-4
I-FAQ yoPhononongo lweSiteshi se-YouTube
Ngaba ungabonelela ngovavanyo lwejelo kwiiChannel ze-YouTube ezingezizo ezesiNgesi?
Ngaba unokuNika ezi Iinkonzo kwiiChannel ze-YouTube ezingezizo ezesiNgesi?
Uza kurekhoda ixesha elingakanani ukuvavanya isitishi sam?
Ividiyo oya kuyifumana kuthi iya kuba yimizuzu engama-45 + ubude kwaye izele kukuqonda okuxabisekileyo kwisitishi sakho se-YouTube.
Ividiyo ye-YouTube ye-SEO FAQ
Ngaba iiNombolo eziPhuculweyo, iiNkcazo kunye namagama aphambili / iiHashtags zinokukunceda njani ukuba ukhule isiteshi sam?
Sisebenzisa indibaniselwano yeendlela ezilungileyo kunye nezixhobo eziphambili zophando ukuze ndikunike iNqaku, iNgcaciso kunye namaGama aphambili / ii-Hashtags eziza kukunceda ubonakale ngcono, jonga ubuchwephesha ngakumbi kwaye ukonyuse izinga lokucofa kwe-thru-rate (i-CTR) yevidiyo yakho.
Ngaba uyafuna iChannel yesiQinisekiso sokuNgena kweYouTube?
Hayi, asidingi iziqinisekiso zakho zokungena. Asingeni kwijelo lakho le-YouTube. Endaweni yoko, sikubonelela ngoxwebhu oluneenkcukacha nolula ukusiqonda lula ukuze ukwazi ukuzisebenzisa ngokwakho iingcebiso zakho. Kulula kwaye uya kuthanda ukuphumeza utshintsho olwakho, kuba luya kukunceda ufunde kwaye ukhule njengeYeTuber.
Ngaba ungasebenza naluphi na uhlobo lweChannel ye-YouTube?
Ewe noHayi Masichaze… Ulwimi lwethu lwenkobe sisiNgesi. Kuba sifuna ukukunikezela ngeyona nkonzo ikumgangatho ophezulu, ngelishwa ngekhe sikubonelele ngovavanyo lwethu lwe-SEO ngolunye ulwimi.
Nangona kunjalo… singahambisa inkonzo yethu kuwe ngesiNgesi, emva koko ungasebenzisa iToliki kaGoogle ukuyitshintshela kulwimi lwakho. Itoliki kaGoogle yenza umsebenzi ogqwesileyo wokutolika, ke uya kuba nakho ukuzuza kakhulu kwezi nkonzo, nokuba ijelo lakho likolunye ulwimi.
Ithatha ixesha elingakanani yonke le nkqubo?
Iyakwazi ukwahluka ngokusisiseko kwiinjongo zakho. Ngokubanzi, emva kokusebenzisa iingcebiso zethu, uya kubona ukukhula kancinci phakathi kwenyanga yokuqala kuba i-YouTube ayivuseleli ziphumo kwangoko. Ke, kwiinyanga ezingapheliyo, amandla aya kuthatha kwaye aqhubeke nokuthatha inyanga-emva kwenyanga. Kufana nelori yothutho… iziphumo ziya kuqala ukucotha, kodwa nje ukuba ukhawuleze ngokukhawuleza, uya kube usenza isantya esipheleleyo ngaphambili! Ezi ziphumo zicinga ukuba uzalisekisile iingcebiso zethu kwaye uthumela kwakhona umxholo womgangatho. Nokuba ungakanani na umxholo, iinkonzo zethu ziya kunceda, kodwa umgangatho ophezulu, umxholo ongcono wokuzibona emva kokusebenzisa iingcebiso zethu.
I-FAQ yomzobo weYouTube
Ngaba isiBhengezo seNgcaciso seNgcaciso esiPhuculweyo kunye neeVidiyo ezincinci zeVidiyo zinokukunceda njani ukukhula kwesitishi sam?
Iimpawu zokuqala zibaluleke kakhulu kwihlabathi le-Intanethi. Ukuba umntu utyelela isitishi sakho kwaye akaboni sibhengezo kunye neencwadana ezincinci ezitsala umdla wabo, baya kuyicofa ngokukhawuleza iqhosha ngasemva. Inkonzo yokuyila ngobuchule iya kubeka uncumo ebusweni bakho xa ulayisha iigraphics kwaye ubone "indawo ephambili" yakho ephucukileyo.
Kubaluleke Kangakanani ukuYila iiVidiyo zeVidiyo?
Ukuba ujonga, uya kubona ukuba zonke i-YouTubers eziphambili zisebenzisa iithonjana zevidiyo zesiko ukwenza iividiyo zazo zivele kwaye ufumane ngakumbi ukucofa. Umgangatho, izithonjana zesiko zenza ukuba ividiyo yakho ibonakale kwiividiyo ezinokuba neembono ezininzi okanye zithandwe ngakumbi kunezakho. Nokuba ividiyo yakho ibekwe ezantsi kwiziphumo zokukhangela, i-thumbnail yesiko iya kutsala umdla wabo kwaye ke ibakhuthaze ukuba batyelele ividiyo yakho.
Izithonjana zesiko zikwanceda ukuphucula i-YouTube kunye nenqanaba lokukhangela kuGoogle, ngaloo ndlela zikwenzela ukugcwala kwezinto eziphilayo.
Hayi, asidingi iziqinisekiso zakho zokungena. Asingeni kwijelo lakho le-YouTube. Endaweni yoko, sikunika imizobo ukuze uzilayishe ngokwakho. Kulula kwaye ungathanda ukwenza utshintsho ngokwakho, kuba kuya kukunceda ufunde kwaye ukhule njengeYeTuber.
Ewe! Singayila iigrafiki zalo lonke uhlobo lwesiteshi seYouTube, akunandaba nokuba ungantoni na umxholo wakho.
Ndithini ukuba andithandi ukuthanda uyilo, okanye ndifuna utshintsho?
Nxibelelana nathi ngokulula, chaza ukuba ungathanda ukubona ntoni kutshintshile kwaye siza kwenza uphononongo! Ekugqibeleni, sifuna ukuba uthande imizobo oyifumanayo kwaye uyithumele kwisiteshi sakho seYouTube.
Iyakwazi ukwahluka ngokusisiseko kwiinjongo zakho. Ngokubanzi, emva kokumiliselwa kwemizobo yethu, uya kubona ukukhula kancinci phakathi kwenyanga yokuqala kuba i-YouTube ayivuseleli ziphumo kwangoko. Ke, kwiinyanga ezingapheliyo, amandla aya kuthatha kwaye aqhubeke nokuthatha inyanga-emva kwenyanga. Kufana nelori yothutho… iziphumo ziya kuqala ukucotha, kodwa nje ukuba ukhawuleze ngokukhawuleza, uya kube usenza isantya esipheleleyo ngaphambili! Ezi ziphumo zicinga ukuba uyiphumezile imizobo yethu kwaye uposta umxholo womgangatho. Nokuba ungakanani na umxholo, iinkonzo zethu ziya kunceda, kodwa umgangatho ophezulu, umxholo ongcono wokuzibona emva kokuphumeza imizobo yethu.